Frescobaldi, tonian-dahatsoratra mozika LilyPond azo alaina ao amin'ny Ubuntu | ubunlog
Frescobaldi, tonian-dahatsoratra mozika LilyPond azo alaina ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Frescobaldi isika. Ity dia mpamoaka lahatsoratra amin'ny mozika sheet LilyPond. Ny tanjona dia ny ho mahery, sady miezaka ny ho maivana sy mora ampiasaina. Frescobaldi dia rindrambaiko maimaim-poana, ary azo alaina maimaim-poana eo ambanin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe.
Ny programa dia natao hihazakazaka amin'ny rafitra fandidiana lehibe rehetra, Gnu/Linux, Mac OS X ary MS Windows. Ny anaran'ity programa ity dia avy amin'i Girolamo Frescobaldi (1583-1643), izay italianina mpamoron-kira ny Renaissance farany sy ny mozika fitendry Baroque tany am-boalohany.
Frescobaldi dia manana interface interface maoderina miaraka amin'ny loko azo amboarina, endri-tsoratra ary hitsin-dàlana fitendry, izay koa ahafahantsika mampiasa dikan-teny maro an'ny LilyPond izany, mifidy ho azy ny kinova marina.
1 Toetra ankapoben'ny Frescobaldi
2 Mametraka Frescobaldi Music Editor amin'ny Ubuntu
2.1 Miaraka amin'ny APT
2.2 Toy ny Flatpak
Toetra ankapoben'ny Frescobaldi
Ny programa dia manana mpamoaka lahatsoratra miaraka amin'ny fanasongadinana syntax sy famitana mandeha ho azy.
Manolotra ihany koa a fijerena mozika miaraka amin'ny Point & Click mandroso.
Ny endri-javatra iray hafa dia ny Mpilalao MIDI hihaino ny rakitra MIDI novokarin'i LilyPond.
Afaka manao izany isika maka MIDI fisamborana ho an'ny fampidirana mozika.
endri-javatra SnippetManager, izay ahafahanao mitahiry sy mampihatra sombin-tsoratra, lasitra na script.
Hanome antsika ny fahafahana mampiasa dikan-teny maro an'ny LilyPond, mifidy ho azy ny kinova marina.
Manana a Mitambatra LilyPond Documentation Browser sy Torolàlana ho an'ny mpampiasa.
manana hery mpanampy mozika taratasy mba hametraka haingana isa mozika.
endri-javatra endri-javatra fanaraha-maso smart layout, toy ny fandokoana zavatra manokana ao amin'ny PDF.
Hanana ny mety ho fanafarana MusicXML, Midi ary ABC.
Modern ny interface interface, miaraka amin'ny loko azo amboarina, endri-tsoratra ary hitsin-dàlana fitendry.
Ny programa dia voadika amin'ireto fiteny manaraka ireto: Holandey, Anglisy, Frantsay, Alemana, Italiana, Czech, Rosiana, Espaniola, Galisiana, Tiorka, Poloney, Portiogey Breziliana ary Okrainiana.
Azonao atao ny manova ny mozika avy amin'ny relatif ho tanteraka ary ny mifamadika amin'izany. Hamela antsika koa izany ovay ny fiteny ampiasaina amin'ny anarana naoty sy gadona (miforitra, manasasaka, manampy / manala teboka, mandika, mametaka), sns.
Hanana ny fahafahana manampy izahay fanalahidy, dinamika ary articulation mora, mampiasa ny takelaka fampidirana haingana.
Hanome antsika ny mety manavao ny syntax LilyPond amin'ny fampiasana convert-ly.
Santionany amin'ireo fisehon'ity programa ity ireo. Afaka manatona azy rehetra amin'ny antsipiriany avy ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Mametraka Frescobaldi Music Editor amin'ny Ubuntu
Miaraka amin'ny APT
Betsaka ny fizarana Gnu/Linux no manana Frescobaldi ao amin'ny mpitantana ny fonosana. Amin'ny ankamaroan'ny fizarana miorina amin'ny Debian, ity programa ity, version 3.0.0, dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal (Ctrl+Alt+T) ary ny baiko:
Ity baiko ity dia tokony ho ampy hametrahana an'i Frescobaldi sy ireo miankina aminy. Rehefa tafapetraka ny programa dia azonao atao manomboka mitady ny mpandefa ao amin'ny ekipanay.
Raha tianao izany esory ny programa napetraka miaraka amin'ny APT, ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl+Alt+T) ary manatanteraka izany:
Toy ny Flatpak
Para mametraka Frescobaldi 3.1.3 amin'ny alàlan'ny Flatpak, ilaina ny manana fanohanana an'io teknolojia io ao amin'ny rafitra misy antsika. Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao ary mbola tsy afaka izany dia azonao atao ny manaraka The Guide fa nisy mpiara-miasa nanoratra ity bilaogy ity vao haingana.
Rehefa afaka mametraka ity karazana fonosana ity amin'ny rafitrao ianao, dia ilaina ny manokatra terminal (Ctrl+Alt+T) ary manatanteraka ny baiko ao anatiny:
Raha misy dikan-teny vaovao azo alaina, azo havaozina ity programa ity manoratra:
Amin'ny faran'ny fametrahana, rehefa te hanomboka ny programa ianao dia afaka tadiavo ny mpandefa eo amin'ny solosainao, na soraty ny terminal:
Raha izany no tianao esory ny programa, mila manokatra terminal fotsiny ianao (Ctrl + Alt + T) ary manorata ny baiko:
Ho an'ireo mpampiasa izay liana hahafantatra bebe kokoa momba ny fampiasana ny programa dia afaka mandeha any amin'ny tahirin-kevitra atolotra ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Frescobaldi, tonian-dahatsoratra mozika LilyPond azo alaina ao amin'ny Ubuntu
Ny GNOME 42 dia ho ny kinova miaraka amin'ny endrika boribory indrindra tato ho ato
Efa nivoaka ny version stable an'ny Wine 7.0 ary ireo no vaovao